Warar - Ogeysiis 2021 Q1
Ogeysiis 2021 Q1
Macaamiisha qiimaha leh,
Sannadka 2021 wuxuu la yimid saameyn qoto dheer oo ka timid xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada ee caalamiga ah (COVID-19), taas oo aan khatar weyn ku ahayn nolosha iyo caafimaadka dadka dalal badan, laakiin sidoo kale khatar weyn ku ah dhaqaalaha adduunka. horumarin.
Horumarinta sayniska iyo tikniyoolajiyadda, iyo sidoo kale horumarinta tayada aadanaha, waxaan kalsooni ku qabnaa in cudurka uu aakhirka laga adkaan doono, laakiin, waa inaan si cad u ogaanno in, saameynta cudurkan, dhaqaalaha adduunka oo dhan inuu soo kabso waqti dheer. Sidoo kale, waa inaan helnaa aqoonsi ku filan oo miyir leh soosaarka, keenista iyo gaadiidka, xilligii cudurrada faafa.
Qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa si aad ah kor ugu kacay ilaa iyo 2020Q4. Qiimaha acetone iyo phenol waa labanlaabmay ilaa 2020Q3, taas oo kor u qaaday qiimaha badeecadaheena. Qiimaha sii kordhaya ee alaabada kale ee ceyriinka aasaasiga ah waxay noqdeen udub dhexaadka wax soo saarka kiimikada. Kooxda oo dhan wax badan ayey la ildaran yihiin kor u kaca qiimaha, maaddaama inta badan alaabta ceyriinka laga iibsado dhulweynaha Shiinaha.
Sidoo kale, saameynta cudurka faafa ee COVID-19 awgood, awoodda saadka caalamiga ah ayaa wax badan hoos u dhacday, taasoo horseedday sare u kac weyn oo ku yimid xamuulka badeecadaha. Ciriiriga dekedda, konteenarrada aan habaysnayn ayaa sii xumeeyay qiimaha sii kordhaya ee suuqa shixnadaha badda. Gaadiidka hawada ee sahayda kahortaga cudurrada ayaa sidoo kale riixaya qiimaha sii kordhaya ee suuqyada shixnadaha hawada.Waxay muujineysaa in celceliska qiimaha dhoofinta uu ku dhacay kii ugu sareeyay tobankii sano ee la soo dhaafay.
RMB waxay si joogto ah u qiimeyneysaa tan iyo qeybtii 2aad ee sanadka 2020. Waxaa taageeraya Sino-US qiimaha dulsaarka kaladuwanaanta iyo dalabka xoogan ee maalgashadayaasha shisheeye ee hantida Shiinaha, RMB waxaa lafilayaa inuu sii qadarin doono sanadka 2021. Sidaas darteed dhoofiyaasha Shiinaha waxay la kulmeen cadaadis aad u weyn. ka soo kabashada RMB.
Si loo soo gabagabeeyo, kordhinta kharashyada wax soo saarka, keenista culeyska, kharashka maraakiibta ee sareeya, cadaadiska sicirka sarifka ayaa wali ah ereyada muhiimka ah ee (ugu yaraan) qeybtii 1aad ee 2021 ee warshadaha kiimikada.
Waxaan u hoggaansameynaa adeegga macaamiisha ujeeddo ahaan, waxaanna hubineynaa in sahaydu tahay yoolka koowaad. Waxaan isku daynay intii karaankeenna ah si aan u weyneyno nuugista kharashka oo aan u ilaalino oraahyada, laakiin waxaan xaq u leenahay inaan ku hagaajinno sicirka sida uu yahay isbeddelka suuqa marka loo baahdo. Fahamkaaga naxariista leh aad baa loo qiimeeyaa.
Waad ku mahadsantahay taageeradaada markasta, Salaan wacan.
Waqtiga boostada: Mar-31-2021